Heino yakanakisa yePremier League nguva ye 2019-2020 - teles kudzokorora
Heino yakanakisa yePremier League nguva ye 2019-2020
By bryamangwanabe On Juil 26, 2020
Mwedzi gumi nemaviri mushure mekuita kwayo, mwaka we 2019-2020 Premier League wave kutopera.
Pave paine zvibodzwa zvakakura, kurwiswa kwetanian uye nguva dzezvakaitika apo Liverpool yakahwina zita ravo rekutanga-refu rekubhururuka mumakore makumi matatu mumushandirapamwe wakavhiringidzwa nedenda re coronavirus.
Isu takubvunza iwe kuti utore nguva dzakanakisa dzemwaka - uye mhedzisiro dzakasarudzwa neBR Sport Sport dzinoonekwa pazasi
Iwe unogona kuramba uchipinda uchishandisa dhizaini yepazasi peji, asi zvaunosarudza hazvizoverengeri kumhedzisiro.
1. Liverpool yakunda mukombe uye vachipemberera mushure mekuona Chelsea ichirova Man City
Christian Pulisic akavhura mabara mumutambo unonakidza pakati peChelsea neManchester City musi waChikumi 25
Kwenguva yakareba, yakareba, yakareba, yakareba, munhu wese aiziva Liverpool kuti yaizohwina mukombe uyu mwaka uno.
Uku ndiko kwaive kutonga kwavo kwekuti ivo vaifanirwa kunge vakapemberera zvakanyanya kupfuura vazhinji vevakakunda zita, asi, nekuda kwedenda reCoronona uye kuzorora kwemwedzi mitatu mumwaka, nguva yakangosimbiswa chete June 25.
Zuva iro, vatambi veLiverpool uye vateveri vakatarisa kuManchester City vachitora Chelsea, vachiziva kuti kana danho raPep Guardiola rikatadza kukunda, Reds 'yemakore makumi matatu yakamirira zita rekutiza-pamusoro ichaguma apedza.
City yakarasika, asi mutambo wacho pachawo waive unonakidza kupokana kubva pakatangazve uye kunetsana uyezve kuzorora muridzo wekupedzisira ungangosimbisa mhemberero dzeLiverpool.
Tarisa: Panguva iyo vatambi veLiverpool vakaziva kuti ivo vaive vakundi
2. Iyo coronavirus inomira mwaka
Mitambo iyi yakadzoka nemitemo yekuremekedza mutsika munzvimbo mushure memwaka yakamiswa kuteedzerwa miedzo yeMikel Arteta yakanaka
Kana tiri kutaura nezvenguva dzemwaka, zviri pachena kuti chiitiko chakakura.
Musi waKurume 12, Arsenal yakasimbisa mubati Arteta akaongororwa kuti ane Covid-19. Zuva rakatevera, nhabvu yakarongeka muBritain yakamiswa uye yaisazotangazve kusvika June 17.
3. Leicester yakaisa mapfumbamwe kuSouthampton
Zvinangwa zvitatu zvaVardy zvakauya muchikamu chepiri cheSouthampton's 9-0
Kufunga kuti Southampton yakatamba sei kubva pakatangazve munaJune, zvakaoma kutenda kuti vaive kumagumo kwekurasikirwa kwekutanga mumwaka wakapotsa kaviri.
MunaGumiguru, Leicester yakakwikwidza saAyoze Perez naJamie Vardy vese vakapora hat trick mu 9-0 kukunda.
Icho chaive chiratidzo chinonyadzisa panguva iyoyo uye nekuisa Vasande munzvimbo yeuwandu, asi munzira dzakawanda zvakaratidza kusikwa kwavo. Vakaenderera mberi nekurarama zvakanaka uye vanogona kuve mheremhere yekurwa zvakanyanya pamusoro mwaka unotevera.
4. Norwich inorova Man City
Kukundwa kwaNorwich pamusoro peManchester City yaive yechipiri pakudzoka kwavo kuPremier League
Kudzoka kwaNorwich kuPremier League kunogona kunge kwakave kwenguva pfupi-pfupi, asi ivo vanofanirwa kurumbidzwa nekuda kwemaitiro avo munguva yose.
Nhabvu yavo yekuona-nyore kuona yaive yekukosheswa uye mukutanga kwemwaka yakavabatsira kuburitsa shomashoma - kunyanya pavairova vatambi vanodzivirira Manchester City 3-2 munaGunyana.
Yaive yekutanga kurasikirwa neCity kubva muna Ndira 2019 uye yakapa maCanaries tariro kuti vaigona kudzivirira kuparara. Pakupedzisira, ivo vakapera simba kubva mukubira asi mhedzisiro iyi ichayeukwa kwenguva refu nevari veNorwich.
5. Watford inogumisa Liverpool isinganzwe kumhanya
Ismaila Sarr akarova zvibodzwa zviviri sezvo Watford yakarova Liverpool 3-0
Hapana munhu akaona uyu achiuya.
Liverpool yakange iri parwendo rwayo rwekupedzisira kumisoro yadzakasvika paVicarage Road munaFebruary kuti vatarisana nedivi reWatford mudunhu renzvimbo uye vasina kukunda mumitambo yavo mishanu yekupedzisira.
Asi ma Hornets aenda kune style yekubvisa iyo vakundi inokatyamadza 3-0, ichipedzisa tariro dzeReds dzekupedza mwaka husina kunakidza.
Shanduko: Joel Tagueu anoita chokwadi chakazvipira neMaritimo ...
Didier Drogba anotsigirwa naGohou Michel pasarudzo dzeFF
Authentic feat yaToko-Ekambi naLyon vanobvisa Juventus ...
6. Liverpool yakarova Man City kuti ipfuure masere akajeka
Liverpool yakaburitsa chirevo pamwe nekukunda kwavo kunonakidza kuManchester City munaNovember
Mitambo gumi nemaviri chete mumwaka uye Liverpool yakarova zvekuti Manchester City ine nharo haina kumbobvira yadzokeramo.
MaReds akarova vatambi 3-1 kuAnfield kuti atore mapoinzi masere ekutungamira kumusoro kwetafura.
Pamberi pemutambo uyu yakange yakatemwa sechaive nguva yekutsanangudza muLiverpool makore makumi matatu ekuda kubata chibodzwa, uye zvakazoitika sezvo maRed vakaramba vachisimbisa kubata kwavo nzvimbo yekutanga.
7. Spurs Pochettino bhegi
Pochettino akaraswa mazuva 171 mushure mekutora Tottenham kumafainari eChampions League
Mbudzi akaratidzira kuguma kwenguva ye Spurs apo Mauricio Pochettino rakabiwa mushure memakore mashanu nehafu pagirabhu, naJose Mourinho akakurumidza kumubatira.
Chisarudzo chakarurama? Nguva ichataura, neTottenham haisati yanyatso kuve vamwe vekuva pamusoro pegumi kana kutamba nhabvu yeEuropean mwaka unotevera.
8.Mwanakomana Chinoshamisa Chinangwa Chinopesana neBurnley
Son Heung-min akamhanya makumi manomwe yards pasi peiyo pombi yekukosha iyi inonakidza chinangwa pamusoro peBurnley
Mamwe ezvinangwa zvemwaka uno akaoma kurangarira kuzviita senge zvakatanga nguva yemangwanani isati yasvika, asi kurova kumwechete kunomira pachena: runako rweMwanakomana Heung-min vachipokana naBurnley muna Zvita.
Iye mutambi weTottenham akawana bhora kunze kwebhokisi rake nemasekondi gumi nemaviri uye kubata gumi nevaviri gare gare kwave kwakagovanisa dziviriro yekushanya uye vakapfuura Nick Pope kubatsira Spurs munzira yavo mukukunda mashanu -12.
Kurwiswa kwakapfuura vhoti yeVhoti muna Chivabvu uye zvishoma kubvira pakatangwazve svoto iyi yekushamisa
9. Vardy anosvika pazvinangwa zana zvePremier League
Shanu dzeJamie Vardy dzakanakisa dzePremier League zvibodzwa sezvo mutambi anosvika zana kuLeicester
Jamie Vardy akabatana nekirabhu yakasarudzika kutanga mwedzi uno apo zvibodzwa zvake zviviri zvakapokana naCrystal Palace zvakaita kuti Leicester ifambise mutambi wechi29 kuti asvike 100 zvibodzwa zvePremier League munhoroondo yemakwikwi.
Ichi chiitiko chinonakidza kwazvo, zvakatonyanya kana iwe ukafunga kuti achiri kutamba nhabvu isiri yeligi pazera ramakore makumi maviri nemashanu.
10. Blades tora chinangwa tech hit
Orjan Nyland akatakura bhora pamusoro pechinangwa asi harina kubatwa nehunyanzvi
Izvo hazvina kutora nguva kuti tekinoroji iite nzvimbo yekutaura mushure mekunge mwaka watangwazve - iro zuva chairo rakadzoka, kutaura chokwadi - kunyangwe izvo zvaive zvisina chekuita nemutengesi wevhidhiyo akashata.
Panguva ino yaive tekinoroji yechinangwa yakakonzeresa kusagadzikana sezvo yakatadza kutora yemahara yaOliverwoodwood yekukanda mutsara panguva dhizaini isina chinangwa Sheffield United kuAston Villa.
11. Kugadzwa kwaAncelotti seDirector yeOllton
Ancelotti akatsiva Marco Silva kumaTofi
Everton yakasiya chibvumirano chikuru muna Zvita apo vakakwanisa kunyengerera mangange matatu-nguva Champions League mukombe Carlo Ancelotti kuti ave murairidzi wavo.
Panguva iyoyo, maTeki aive panjodzi yekupinda muhondo yekusimuka, asi MuItaly akavaburitsa munjodzi uye vateveri veOverton vangangofadzwa kuona zvaangaite mushure mekutangisa kuzere. .
12. Luiz's Horror Ratidza vs Man City
Luiz akaonesa kukanganisa kwakajeka pamusoro peManchester City nekutumirwa kuenda
Zuva rekukanganwa David Luiz chero chinhu chinogona kukanganisa.
Pokana neManchester City kuEtihad Stadium munaChikumi, mutambi weArsenal akabuda pabhenji muhafu yekutanga, akabata bata raRaheem Sterling, akapa chirango, achibva atanga kuenda.
Yakanga isiri nguva yakakwana futi, ne chibvumirano chake pakupera kwemwedzi uno. Lucky kwaari, Arteta akachengeta kutenda uye Luiz akasayina chibvumirano chegore rimwe mazuva mashoma gare gare.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://www.bbc.com/sport/football/53486619
Inter Milan yakasimuka kuenda kune yechipiri muSerie A ine 3-0 kukunda kweGenoa
Manhunt anoenderera muSouth Africa mushure me 69 musungwa akatiza kubva muhusungwa
Chinjana: Joel Tagueu anozvipira chaiko naMaritimo muPortugal
Authentic feat yaToko-Ekambi naLyon vanobvisa Juventus kubva kuTurin uye…